Antenimierampirenena: tsy mihevitra hametra-pialana ny kandidà R. Jean Max | NewsMada
Antenimierampirenena: tsy mihevitra hametra-pialana ny kandidà R. Jean Max
Ny zava-misy ankehitriny ny firotsahan’ny filohan’ny Antenimierampirenena sy ny hoe: inona ny fepetra tokony horaisina raha miseho ny tranga toy izany?” Izay ny nambaran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean Max, teny Tsimbazaza, ny faran’ny herinandro teo, momba ny amin’ny tokony hanaovany fametraham-pialany na tsia amin’izany noho ny maha kandidà ho filohan’ny Repoblika azy amin’ny fifidianana amin’ny 7 novambra.
Tsy ao anatin’ireo karazan-dalàna roa, ny lalàmpanorenana sy ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana, ary ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierampirenena amin’ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Antenimierampirenena na tsia, raha mirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika izy, araka ny fanazavany. Ao anatin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra tanteraka, hanomboka ny 7 oktobra, ny fivoriana ara-potoana faharoa an’ny parlemanta, hanomboka ny talata fahatelo amin’io volana oktobra io.
Misy ny didy fakan-tahaka
Notsiahiviny ny didy fakan-tahaka tamin’ny fotoan’androny, ny filohan’ny Antenimpierampirenena, ny pasitera Andriamanjato Richard, nirotsaka ho kandidà ho filohan’ny Repoblika, taona 1996. Rehefa tonga ny fotoana hanaovana fampielezan-kevitra, nanendry mpisolo toerana vonjimaika izy. Rehefa vita ny fampielezan-kevitra, miverina amin’ny toerany izy.
Na ahoana na ahona, tena misy ve ny fanajana ny soatoavina repoblikanina sy ny etika politika amin’izany? Tsy mampiasa fahefam-panjakana rehefa manao fampielezan-kevitra ny tena, na mametra-pialana na tsia. Ao anatin’izany ny olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana. Manomboka amin’ny fiara sy ny mpamily ary ny solika izany, ohatra. Tena hanao sy hahavita izany ve ireo olom-panjakana mirotsa-kofidina amin’izao?